Bisha Ramadan oo caawa laga arkay Soomaaliya iyo Kenya
Sawir hore oo muujinaya bilashada bisha Ramadan
Wasaaradda Awqaafta iyo arrimaha Diintaee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa caawa ku dhawaaqday in berri oo jimco ah ay tahay maalinta koowaad ee bisha Ramadaan,lagana arkay gudaha Dalka.
Sidoo kale Bisha barakaysan ee Ramadan ayaa laga arkay Galbeedka Magaalada Wajeer ee waqooyi bari Kenya, sida uu VOA-da u xaqiijiyay Sheekh Maxamuud Maxamed Shibli oo kamid ah Culimada Soomaaliyeed ee Nairobi.
Sheekh Shibli ayaa sheegay in Ilaa Todobo (7) qof ay arkeen bilashada bisha Ramadan, sidaasina ay berri oo jimce ah ay ku tahay maalin Soon ah, sida uu u xaqiijiyay idaacada VOA.
Bisha barakaysan ee Ramadaan ayaa sannadkan ku soo beegmaysa iyada oo dunidu ay la tacaalayso cudurka COVID 19. Qaar ka mid ah culimada soomaaliyeed ayaa ku baaqay in sadaqada iyo taageerada dadka sabooolka ah la badiyo inta lagu jiro bisha Ramadaan.
Guud ahaan Masaajidda caalamka ayaa xiran si looga hortago cudurka COVID19 iyada oo hay’adda u saraysa culimada Sucuudigu ay sheegeen inaan Salaadaha jamaacada ah lagu tukan doonin Labada Xaram ee Maka iyo Madiina iyaga oo umadda islaamka ugu baaqay in ay guryahooda ku tukadaan.